Andapa : Rangahy 60 taona mpanamboatra basy, voasambotra – Midi Madagasikara
You Are Here: Home → Faits-Divers → 2019 → septembre → 4 → Andapa : Rangahy 60 taona mpanamboatra basy, voasambotra
Andapa : Rangahy 60 taona mpanamboatra basy, voasambotra
Redaction Midi Madagasikara 4 septembre 2019 1 Comment
Basy vita gasy efatra, niaraka tamin’ny fitaovana fanamboarana azy ireo no tra-tehaky ny zandary avy ao amin’ny Vondron-tobim-paritra Andapa, ny faran’ny herinandro teo. Rangahy lehibe iray efa ho 60 taona no voasambotra tamin’izany.
Nisy ny angom-baovao azo teo anivon’ny zandary mahakasika ny fisiana olona iray mpanamboatra sy mpivaroatra basy vita gasy ao amin’ny fokontany Antanimbaribe, kaominina Ambalamanasa distrika Andapa. Mba ho fampandriana fahalemana ao anatin’ny faritra Sava, dia nandray ny andraikiny avy hatrany ny tompon’andraikitra voalohan’ny Vondron-tobim-pileovan’ny zandary misahana iny faritra iny ka nampaniraka ireo teo ambany fahefany nidina tany an-toerana. Nisy tokoa araka izany ny vokatra, satria dia mbola teo am-pikononkononana sy teo am-panamboarana ireo fitaovam-piadiana mihitsy ny lehilahy iray antsoina hoe J., izay fantan-daza any an-toerana amin’io resaka io no tra-tehaky ny zandary. Nosavaina avy hatrany ny tranony ary tamin’izany no nahitana ireo basy gasy efatra niaraka tamin’ireo fitaovana isan-karazany fanamboarana basy sy bala marobe. « Tao anatin’ny famotorana dia niaiky ny heloka vitany io lehilahy io ary natolotra ny fampanoavana » hoy ny vaovao. Tsiahivina, fa isan’ny melohan’ny lalàna manan-kery eto amintsika ny fanamboarana basy sy bala tsy ara-dalàna. Ary ireny olona ireny ihany koa no isan’ny mpamatsy basy ireo andian’olon-dratsy mpanao fanafihana mitam-piadiana; izay hita ho mirongatra tanteraka amin’izao. Tsy mitsahatra ny manentana hatrany ny olona izay manana angom-baovao mba tsy hisalasala hanambara izany moa ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenana. « Izany no antoky ny fahombiazana ,na izany na tsy izany, dia miezaka hatrany ny Zandarimaria manakaiky ny vahoaka mba hahafantarana bebe kokoa ny olana misy, ary hamaha izany ao anatin’ny fotoana fohy mba ho fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ».
Rolland Edouard Firmin 4 septembre 2019 at 16 h 16 min · Edit
Sao kosa mba asiana fanatsarana sy ampanarahina lalana velona misy eto Madagascar fanamboarana fitaovampiadiana toy izao e,tsy ampiasaina aminy lafiny ratsy ilay izy fa mba hoentina hanasoavana mpiara-monina ka atao eo ambany fiahiany tompon’andraikim-panjakana fanaraha-maso fanamboarana sy fampiasana azy fa hita mba maro ihany ny manampahaizan sy moikaroka Malagasy 😆😆